अति नै आकर्षक हुन्छन् यी ४ राशि हुने पुरुषहरु, जसलाई पाउन युवतीहरुले मरिहत्ते नै गर्छन् ! – Enepali Samchar
अति नै आकर्षक हुन्छन् यी ४ राशि हुने पुरुषहरु, जसलाई पाउन युवतीहरुले मरिहत्ते नै गर्छन् !
November 14, 2020 adminLeaveaComment on अति नै आकर्षक हुन्छन् यी ४ राशि हुने पुरुषहरु, जसलाई पाउन युवतीहरुले मरिहत्ते नै गर्छन् !
ज्योतिष शास्त्र जीवनसँग जोडिएका धेरै तथ्यहरु बताउने गर्छ। हरेक राशिको फरक व्यवहार हुने गर्छ भने फरक राशिको फरक भविष्य पनि हुनेछ। जिन्दगिको असफलता र सफलताको विषयमा पनि ज्योतिष शास्त्र=ले धेरै कुरा बताउने गर्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार महिलाहरु र युवतीहरु निम्न उल्लेखित राशि भएका पुरुषहरु धेरै आकर्षित हुने गर्छन्।
यस राशि भएका पुरुषहरु व्यक्तित्व कोमल र रोमान्टिक हुने गर्छन्। यस राशि भएका पुरुषहरु मजबूत भावनात्मक सम्बन्ध राख्ने गर्छन्। जसका कारण महिलाहरुको नजरमा छिट्टै पर्ने गर्छन्।
यस राशि भएका पुरुषहरु मित्रवत भावना राख्ने गर्छन् भने बुद्धिमानी पनि रहने हुँदा धेरै युवतीको नजरमा पर्ने गर्छन्। साथै यस राशि भएका पुरुषहरु उदार र जोशीलापन धेरै हुने हुँदा महिलाहरुले मन पराउने गर्छन्। साथै आफ्नो हाउ-भाउबाटनै युवतीलाई आकर्षित गर्ने क्षमता राख्छन्।
यस राशि भएका पुरुषहरु प्रेम र कर्तव्यको सन्तुलन कायम राख्न खप्पिस हुने गर्छन्। साथै परिस्थिति अनुसार निर्णय लिन सक्ने हुँदा पनि पनि महिलाहरुको नजरमा छिट्टै पर्ने गर्छन्। कलात्मक रुपमा पनि धेरै अगडी हुने हुँदा तुला राशिका पुरुषहरु आकर्षक हुनेछन्।
यस राशिका पुरुषहरु प्राय युवतीको लागि आकर्षणको केन्द्रमा हुने गर्छन्। आफ्नो व्यक्तित्वबाट छिट्टै अरुलाई प्रभावित गर्ने क्षमता मकर राशिका पुरुषहरुमा हुने गर्छ। मित्रत पनि राम्रोसँग निभाउने हुँदा मकर राशिहरुलाई आकर्षित मान्ने गरिन्छ।
मंगल ग्रहको मार्गी चाल, यी राशिको लागि अत्यन्त शुभ ! तपाइँ नै पो पर्नुभयो कि ?
बडिमालिका को द’र्शन गरी || भेटी स्वरूप ॐ ले’खी शेयर गर्दै पढ्नुहोस् || २०७८ साल बैशाख -७ गते मंगलबारको राशिफल ||पञ्चांग र शुभ साइत || पढ्नुहोस ||
अध्यादेश जारीप्रति दाहालको आपत्ति संगै ओली झन् रुस्ट के होला अबको स्थिति